विद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्प- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
सम्झौता सकिन ४ वर्ष बाँकी रहेको उनले बताए । गुरुङले ०६० साल असोज ६ गते तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाबाट पम्प सञ्चालनका लागि सिफारिस लिएका थिए । सडक विभागबाट समेत उनले अनुमति लिएका थिए । प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:१४
कान्तिपुरले गरेको खोजबाट अस्मिता र शालिकरामबीचको सम्बन्धका नयाँ तथ्य फेला परेका छन्
भाद्र ७, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — ओखलढुंगाको रावादुलु गाउँपालिकाकी ५५ वर्षीया नीलकुमारी कार्की महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत छिन् । सुरुमा आएको हल्का ज्वरो बढेर शरीर नातागत बन्दै गएपछि साउन पहिलो साता उनी छोराछोरीको बोलावटमा काठमाडौं आइन् ।
८ः५५– कसम अब त अति भयो । तिम्रो दाइलाई भन्छु ।
शालिकरामको आत्महत्यापछि किन न्युज२४ ले बारम्बार अस्मिताको अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो ? के त्यसमा रविको कुनै भूमिका थियो ? यसबारे भने केही तथ्य खुलेको छैन ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:५९